Turkiga Oo Somaliland Soo Gaadhsiisay 5000 Tan Oo Raashin Caawimo ah | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Turkiga Oo Somaliland Soo Gaadhsiisay 5000 Tan Oo Raashin Caawimo ah
Berbera (SDWO.com): Markab sida c raashin aawimo ah oo dhan 5000 Tan oo ay dawladda Turkigu ugu deeqday dadkii reer Somaliland ee ay abaaruhu wax-yeeleeyeen ayaa maanta soo gaadhay dekadda magaaladda Berbera, iyadoo ay halkaasi kagala wareegeen xubno ka tirsan golaha wasiirrada.
Cawimadan ay dawladda Turkigu soo gaadhsiisay Somalialnd ayaa ka danbeeyya kadib markii ay hore baaq qaylo-dhaan ah Turkiga ugu direen madaxweynaha Somaliland iyo gudiga abaaraha Somalialnd ee heer qaran.
Talaabadani oo noqonaysa in dawladda Turkigu ay ka soo jawaabeen baaqii ay hore Somaliland ugu dirtay.
Waxaana dawladda Turkiga caawimadaasi kagala wareegay dekadda magaaladda Berbera wefti uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland, oo ay ka mid ahaayeen wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda iyo sidoo kale xubno ka socday gudiga abaaraha heer qaran ee Somaliland, maaluka dekadda Berbera iyo maamulka gobolka Saaxil.
Geesta kale dawladda Turkiga waxaa halkaasi goob joog ka ahaa wakiilka Turkiga u fadhiya magaaladda Hargaysa Ambassador iyo masuuliyiin kale.
Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Somaliland Axmed Aadan Ismaaciil (Kayse), ayaa sheegay in caawimadan ay dawladda Turkigu maanta soo gaadhsiisay Somaliland in ay ka danbaysay baaq ay hore ugu direen Turkiga xukuumadda Somaliland iyo gudiga abaaraha heer qaran ee Somaliland.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Waxaanu maanta dawladda Turkiga halkan kaga guddoomaynaa caawimo raashin ah, oo dhan 5000 Tan oo ay ugu deeqeen Somaliland dadkii ay abaaruhu wax-yeeleeyeen. Caawimadani waxay ka danbaysay baaqii qaylo-dhaanta ahaa ee ay hore dawladda Trukiga ugu direen gudiga abaaraha heer qaran iyo baaqii uu madaxweynaha Somaliland, xiligii ay dalka abaaruhu ka taagnaayeen.
Tanina waa baaqii oo ay ka soo jawaabeen dawladda Turkigu, taasi oo aanu aad iyo aad ugaga mahad naqayno dawladda Turkiga, farxad weyna ay noo tahay in aanu maanta ka gudoonno dawladda Turkiga caawimadani. 5000 Tan oo raashin ah ayay imika inoogu deeqeen, oo isugu jira Daqiiq iyo Sankor, oo loogu tallo-galay in la gaadhsiiyo dadkii ay baaruhu wax-yeeleeyeen”.
Axmed Aadan Kayse, waxa kale oo uu sheegay in aanay caawimadani ahayn tii u horaysay ee ay dawladda Turkigu caawimo soo
gaadhsiiso Somaliland. “Waxa kale oo ay dawladda Turkigu hore noogu deeqeen 5000 tan oo raashin ah, sanadkii 2013-kii ay soo gaadhsiiyeen Somaliland, iyadoo ay taasi ka dhigayso 10,000 Tan. Iyadoo ka dhigaysa ilaa hadda inta caawimo ah ee ay dawladda Turkigu ina soo gaadhsiisay”ayuu yidhi wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda.
Dhinaca kale safiirka dawladda Turkiga u fadhiya caasimadda Somaliland ee Hargaysa Mr. Musafer, oo qayb ka ahaa wareejinta raashinkani mucaawimadda ah ee ay dawladda Turkigu ugu deeqday Somaliland ayaa sheegay in aanay ahayn markii u horaysay oo dawladda Turkigu ay caawimo noocan ah soo gaadhsiiso Somaliland.
Waxaanu tilmaamay danjire, Musayfer in dawladda Turkigu ay Somaliland kala shaqayn doonto dhinacyadda caawimadda, horumarka, arrimaha bani’aadan-nimadda iyo maal-gelinta.
Waxaanu yidhi “Waxaan halkan u joognaa dhamaanteen wareejinta raashinkan caawimadda ah ee aanu ugu tallo-galnay in aanu ku caawino walaalaheena reer Somaliland ee ay baartu wax-yeelaysay.
Waanu sii wadaynaa in aanu la shaqayno dawladda iyo dadka Somaliland mustaqbalka, ma aha oo keliya in aanu Somaliland kala shaqayn doono caawinta raashinka iyo arrimaha bini’aadan-nimadda, laakiin waxaanu kala shaqayn doonaa dhamaanba dhinacyadda kale, oo ay ku jiraan barnaamijyadda horumarinta, kobocinta dhaqaalaha, iyo sidoo kale maal-gelinta. Taasi waa mid naga go’an, waana mid masuuliyadayadda ah”.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland Cumar Shucayb, oo munaasibadii ay raashinka kula wareegayeen ka hadlay ayaa dawladda Turkiga uga mahad naqay caawimadan ay soo gaadhsiiyeen.
Waxaanu yidhi “Aad iyo aad ayaanu ugu mahad naqaynaa dawladda Turkiga haddii aanu nahay xukuumadda Somaliland, caawimadan bini’aadan-nimo ee ay na soo gaadhsiiyeen. Waxaanu iska kaashan doonaa dawladda Turkiga dhinacyo badan”.
Badhasaab ku xigeenka gobolka Saaxil, Maxamed Cismaan Xaaji Axmed (Indho-balac), oo isna halkaasi ka hadlay waxa uu yidhi “Waxaan aad iyo aad ugu mahad naqaynaa walaalaheena dawladda Turkiga oo mar walba na garab taagan, oo nagu caawiyo waxyaabaha daruuriga ah, sida raahsinka.
Ma aha markii u horaysay oo ay Turkigu ina caawiyaan, waxaanan leenahay sii wada caawimadda. Aad iyo aad ayaanu ugaga mahad celinaynaa dawladda Turkiga caawimadani ay na soo gaadhsiisay”.
Waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay maareeyaha dekadda Berbera Axmed Yuusuf Dirir, waxaanu sheegay in ay dawlada Turkiga uga mahad naqayaan caawimadani ay soo gaadhsiisay.
Isku soo wada duuboo, ma aha markii u horaysay ee ay dawladda Turkigu cawimo noocan oo kale ah soo gaadhsiisao Somaliland, hase yeeshee waxaa jirtay in sanadkii 2013-kii xiligii ay dalka abaaruhu ka jireen in ay soo gaadhsiiyay 5000 tan, iyadoo tiradda mucaawimadda Turkigu Somaliland soo gaadhsiiyay ka dhigaysa 10000 Ton.
Inkastoo aanay haatan ka taagnayn Somaliland xaalad abaareed, hadana sida ay masuuliyiintani sheegeen raashinkan caawimadda ah ayaa loo qaybin doonaa dadkii ay baaruhu hore u wax-yeeleeyeen.
Hase yeeshee deeqdan ay maanta dawladda Turkigu soo gaadhsiisay Somaliland ayaa u muuqata mid ay aad ula daah-day, isla markaana ka habsaantay xiligii loogu tallo-galay ee ay dalka abaaruhu ka jireen.